Örebro: Cunsuriyada iyo goobaha caafimaadka | Somaliska
Xarunta caafimaadka ee xaafada Vivalla Örebro ee ay ku badanyihiin Soomaalida ayaa lagu eedeeyay in ay cunsuriyeeyaan dadka soo galootiga ah ee aan ku hadli karin luuqada Swedishka. Shaqaalaha xarunta ayaa la sheegay in aysan turjumaan u qaban dadka ay luuqadu ku adagtahay isla markaana aysan daryeel caafimaad oo wanaagsan siin. Sida ay qortay idaacada Sweden, Waxaa tusaale loo soo qaatay in xaruntaas markii qof xanuunsan uu tago oo soo galooti ah aysan u qaban turjumaan, waxaa ka sii daran in qofka daryeelka caafimaad u baahan ay mararka qaar u diraan goobo kale ama ay toos ugu diidaan daryeelka caafimaadka. Haddii qofku uu ka tagi waayo hospitaalka ayaa la sheegay in ay ugu hanjabaan in booliska loogu wici doono. Arintaan ayaa waxaa qeylo dhaan ka muujiyay ururada u dooda xaquuqda dadka ee ka dhisan Örebro iyadoo hospitaalka Vivalla lagu dacweeyay maamulka gobolka. Maamulka ayaa sheegay in la doonayo in qofkasta uu helo daryeel caafimaad oo dhamaystiran balse waxay ka soo horjeesteen eedeynta ah in cunsuriyad ay ka jirto goobtaasi. Eedeymaha loo soo jeediyo goobaha caafimaadka Sweden iyo sida ay ula dhaqmaan soo galootiga ayaa ah kuwo aan la soo koobi karin. Soomaalida ayaa qaasatan dhibaato weyn ku qabta xiriirka hospitaalada. Marka laga reebo turjumaanka ayaa dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah in aysan dhaqaatiirta Sweden fahmin cudurada iyo baahida bukaanada Soomaalida. Halkaan ka akhriso mowduuc kale oo horay aan uga qornay dhibaatada caafimaadka.
Xarunta caafimaadka ee xaafada Vivalla Örebro ee ay ku badanyihiin Soomaalida ayaa lagu eedeeyay in ay cunsuriyeeyaan dadka soo galootiga ah ee aan ku hadli karin luuqada Swedishka. Shaqaalaha xarunta ayaa la sheegay in aysan turjumaan u qaban dadka ay luuqadu ku adagtahay isla markaana aysan daryeel caafimaad oo wanaagsan siin.
Sida ay qortay idaacada Sweden, Waxaa tusaale loo soo qaatay in xaruntaas markii qof xanuunsan uu tago oo soo galooti ah aysan u qaban turjumaan, waxaa ka sii daran in qofka daryeelka caafimaad u baahan ay mararka qaar u diraan goobo kale ama ay toos ugu diidaan daryeelka caafimaadka. Haddii qofku uu ka tagi waayo hospitaalka ayaa la sheegay in ay ugu hanjabaan in booliska loogu wici doono.
Arintaan ayaa waxaa qeylo dhaan ka muujiyay ururada u dooda xaquuqda dadka ee ka dhisan Örebro iyadoo hospitaalka Vivalla lagu dacweeyay maamulka gobolka. Maamulka ayaa sheegay in la doonayo in qofkasta uu helo daryeel caafimaad oo dhamaystiran balse waxay ka soo horjeesteen eedeynta ah in cunsuriyad ay ka jirto goobtaasi.
Eedeymaha loo soo jeediyo goobaha caafimaadka Sweden iyo sida ay ula dhaqmaan soo galootiga ayaa ah kuwo aan la soo koobi karin. Soomaalida ayaa qaasatan dhibaato weyn ku qabta xiriirka hospitaalada. Marka laga reebo turjumaanka ayaa dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah in aysan dhaqaatiirta Sweden fahmin cudurada iyo baahida bukaanada Soomaalida. Halkaan ka akhriso mowduuc kale oo horay aan uga qornay dhibaatada caafimaadka.
Göteborg: Haweeney maxkamad loo soo taagay dhac ay u geeysatay waayeelo
Af-Soomaaliga oo lagu daray luuqadaha lagu gali karo imtixaanka baabuurta
June 24, 2012 at 12:04
Waxan Annigu qabaa in cunsiriyeyn aysan meesha oolin ee is fahmi waa luqada ah uu jiro maxaa dhacay haddii waxa aad ka hadleysaba aanan fahmin sideen wax kuugu qaban karaa xataa aadan dhihi karin waxan u baahnahay turjubaan luqadas ayaan ku hadlaa. Tan dhaqaatiirtana waxay u fahmi la’a yihiin waxaa jira eray badanaa ay soomaalideenu isticmaasho kaasoo ah WAA LEYGU DHAN YAHAY(yacnii meel ii fayow ma jirto) mar waa laygu dhan yahay hadaan dhaho meel gooniya amase cudur gooniya oo uu kaa daweeyo uma sheegin. Waxaan anniga xal u arkaa mar koowaad inaan luqada barano haddii aan cusub nahayna aan saaxiib na caawiya raadsano, dhaqtarkana aan dhahna meel ama meelahaas ayaa i xanuunay ee aysan sheekadeenu noqon WAA LAYGU DHAN YAHAY.
June 24, 2012 at 12:05
asc dhaman asxabta fikradaha dhibta
waa laygu dhan yahay micnaheda ma ahan meelshan ama meshaas ayan ka xanunsahay waxan u malaynayaa inay la micno tahay inu qofka garanaynin exactly mesha u ka xanunsanayo ! Mida ka somalidenu waxa muhim u ah inay lugada ku hadli karan waayo luqada ad baratid waxay ku faaidaynaysa inad wax walba heshid ama ku fududaadan. Sida xaga cafimadka inad shegto mesha ad ka jiran.. Iyo wax yaalo daruuri ah horaa loo jiri mel setahay aya loola yaal … Micnaha dhanka fican ayan ula jeedaa …bye
June 24, 2012 at 12:45
khadija hadalkas ad tidhi somalidu waxay adeegsadan kalmado aan mel lo qado lahayn sida waa laygu dhan yahay
waxa kaloo jirta oo ay isticmalaan il iyo baal iskuma keeno marka lays dhaho luqad kale halagu turjumo waa ay adagtahay
iyo qofbaa iga dhex qayliya waxas oo dhan
asc aniga waxanla yabanahey dadka camalka ka dhigtay oo intey soo galan webka hada inay caayan ama ay wax ka sheegan u soo taagan qofka siduu asaga yahey ayey moodaan dadka kale waxan idiin leeyahey wad jiran tihiine allaah idiin cafiyo waxa laga hadlayna maaha isfaham la aane waa cunsuriyeyn ay sameeyaan goobaha ka caafimaad wabilaahi towfiiq
June 24, 2012 at 14:01
waxaan qabaa waxaa jira cusuriyad xun oo waliba gooni ku ah Somalida.
Waxaan xasuustaa malin ayaa maqlayay naag Svensk ah oo dhahayso somalidu waa dad kayimid dal burburay marka garan mahayaan nadaamka ee u dulqaata.sidaas oo ay tahay igama ay aqoon badnayn waxaana ka imid somalia.illahay amarkiis si dheh.
Dadka Swedhsihka o indha ciran , oo u qaba ineey malaa’ik yihiin …Waxaa idinka daahsoon xaqiiq badan . Waxaana idinkugu wacan , laga yaabee inay tahay inaadnan la dhaqmin , ama la tacaamulin dadka swedhsishka ah . Xaqiiqatan , waxaa jirta cusnuriyad aan DAAHSAARNEEYN . Waxay ka jirtaa SOCIALKA , oo ilmaha soomaalida uun gurubsada . Haddaad leeda waalidiintaa is dagaasha , kuwaan weligood waa maalin isku qabsan ayaa ilmihii laga qaatay . Isbitaalada ayay ka jirtaa , imisaa gabadh soomaaliyeed oo fola la yiri , ma bilo dhawid ee jidka ku dhashay ilmihiina qaboow ka galay , oo handkappad noqday ??
Xaqiiqda qofka moog maalin uun wuu la kulmi doonaa .
asc all umada somaliyeed marka xigta waxaan layabanahay markasto maxaan isku edayna anaga hada jimcale wuxu soqoray cunsuriyiin marka fikirkeena kama dhibaneynee anaga isku sonoqonay hada wa macquul isfaham la.aan kaliya haday ahaleheed ee jimcale wuxu soqoray mar marka qaar police a laisku cabsina marka war ha isku sonoqoninee horay usocda wadhibaato hadi ilahay xumaantada kutuso waxaad umalaysa dadka qaar inayba cunsuriyashi yihiin siday uhadlayaan walhi
June 24, 2012 at 16:40
police aaba laisku wacaa qof xanuunsan o police aba laisku wacaa sucuudi arabia mala joga ayada maqlijiray coliceka walaga dhuuntaahe
June 24, 2012 at 19:00
Walaalayaal waan idin salaamay salaan ka dib see wax ku wadaan meesha cunsuriyad ayaa ka jirta ayaa la idin yiri yaaba isla gaarey halkaas ayaa i xanuuneysa iyo qaabilaadba, runtii in la iska hadlaa ma fiicna ee fadlan mowduuca fahma marka ka dibna fikir wanaagsan ka dhiibta aana danaheena u midowno anagu Soomaali ahaan yaanaan wax iska sheegin,e sidaas ayaan guul ku gaari karnaa walaalayaal.
June 24, 2012 at 19:06
Ma ogidiin miyaa qofku inuu sharciyan xaq u leeyahay in uu turjumaan helo hadduu uusan luqada si fiican u aqoon,mise og tahay in aad dacwad ku soo oogi kartid dhaqtarkii kuu diida inaad inaad turjubaan hesho.
maalin dhaweyd waxaad soo qortay in dadkaan hala dhex galo maantana waa dad xun ayaa leedahay oo cunsuriyiin ah marka in ey cinsuriyiin yihiin ma aadan ogeyn miyaa, marka hadda kadib waa in aad ogadaa in ey yihiin dad cunsuri ah oo ey dani nagu qasabtay in aan wadankooda ku noolaano.
mida kale kuwa dhahaayo luuqad waxaan leeyahay fahma maqaalka meesha ku qoran maahan luuqad ee waa cunsuriyad anigana in igu filan wadankaan waan jogaa aqoon fcna waan u leeyahy wabilaahi towfiiq.
Salaan ka dib qof kasta waxa fiicaan in uu fakaro uma malaynayo in wadankan cunsiriyad taal hadday talana waa mid dadka dhoowranaya sharaftooda .. somali haddannahay runta waa na dhibta bal hadda nin swedash ah intu albabka kugu so garco bal wuxu ku waydisto sii? waxad ka bilabaya gaalkan cad muxu so doonay .. in aan xishoodno oo aan barano luuqada wadanka waa lama huuraan. aniga waxaan la kulma qamiis waalba dhaqatar waxaan la i qabta tajubaan ano fahmaya luuqada waa in qofka shaqada leh ee tarjubanka xushmeya qatarkana taladisa qaata … dadoow idinka is necebe neceb kale wax idin soo kor dhin maayo —-
yaasiin barakalow says:
June 25, 2012 at 20:43
salaan guud kadib anige waxay ilatahay in arintaan laga fiirsado oo marka hore somaliyeey alxamdulilaah aan dhahno meel noo roon maleh meelkasto wax baan kasheegeynaa hadaad arki laheedeen wadamada khaliijka carabta waxa kajiro walaahi naag foolaneyso oo dhalmo ah ayaa laleeyhay wadankaan maad u dhalatay maya hadey dhahdo albaabka ayaa laga celinaayaa caruurta ku dhalatay looma ogolo iskuulada war iska aamusa jimcaalow nicmaa kujirtiin iskuulada dawlada ayaan kawadaa looma ogolo soo galootiga kudadaala xaga tarbiyada islaamka ilmahiina bes waxkale oo dhib ah hasheeganina jimcaalow walaalow somalida usheeg in sweden ay utahay wadankoodii labaad kaalaya arka waxa nugu heysto sacuudiga iyo khaliijka qof bini aadam ah ayaa kafiil naga ah oo wuxuu doono dadka kasameeyo
najmo hasan says:
June 26, 2012 at 13:21
asc waxaan daganahay vivalla waa run waa cunsuryiin taas aanaa marqaati ka aha anayna igu sameyeen waan xanuun sanaa waxaa i soo diray dhaqtar waxay igu dheheen bax na soo wac waxaan tusay warqada dhaqtarka balan aya ii qabtee marka waxan ku dhahay waxaan ubahanay turjubaan waxay idheheen waad ku hadli kartaa waxaan ku iri waan ku hadlkaraa lakin aniga dhibatadayda ku ma wada sheegi karo afsiwidhish maxayeelay wadan ka waxaan jogaa 2sano. alxamdulilaah waan muran kadib midkale aanoo soo dhexkashay markaas waa laguu qanaa aali idhahay laymana qaban waan iska dhaafay mar waa dad xun